Ihe osise YouTube - AudienceGain Ltd
Zụta Real Adwords YouTube Ndị debanyere aha
Zụta Real Adwords YouTube Echiche
Zụta Akaụntụ Google Adsense
Zụta Ọrụ Monetization Maka Facebook Na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Zụta Akaụntụ TikTok Monetized
Zụta ndị na-eso 100000 na Nlele 100000 Maka Ngwa Tiktok Onye Okike
Zụta ndị na-eso ụzọ TikTok
Zụrụ ndị na-ekiri Twitch
Uru ịzụrụ Ihe osise YouTube
Mee ka ọwa ọrụ gị dịkwuo mma.
Na-eme ka ika gị mara ngwa ngwa.
Gbaa ndị mmadụ ume ka ha lelee vidio gị.
Mepụta ezigbo echiche mbụ.
Mee ntụkwasị obi, ihu ọma na iguzosi ike n'ihe.
Dịkwuo ahịa & Ọnọdụ ahịa.
Lee anyị 219 + nyocha na
Ezigbo Amatụnanya na ntụkwasị obi Team m na-akwado otu a maka mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze na-arụ ọrụ n'ezie ma na-arụ ọrụ dị ịtụnanya hụrụ n'anya ma na-ekele gị nke ukwuu ugbu a, otu iwu m agwụla ma na-abịa n'izu na-arịa ọrịa na-etinye 2 ndị ọzọ iwu ọhụrụ na ịntanetị achọtala m nke a and mma ndi mmadu ekelekwaa gi ozo
Enwere m ekele maka ezigbo ọrụ ndị otu a na-eme n'eziokwu na ijere ndị ọzọ ozi site n'inyere ha aka, ị na-ebili naanị mgbe ị buliri ndị ọzọ. O siri ike ịchọta eziokwu n'oge a na ime ihe n'eziokwu dị oke ọnụ. Anam ekene otu a. Ha kwesiri otutu ihe kariri! Ha nyefere ọbụna karịa nkwa ha. M ga-akwado ya nye onye ọ bụla na mụ onwe m ga-akpọtụrụ ha ugboro ugboro n'ọdịnihu! Chukwu Gozie Ha!
Daalụ ndị na-ege ntị na m nwetara 4k youtube elekere elekere na ọwa m na-echekwa ego, Jacob na Brian dị ezigbo mma ma na-enye aka ha na-aza ozi m niile, ọ bụ oge na-egbu oge mana enwere m ike ịghọta n'ihi mmelite sistemụ ha, daalụ ọzọ AudienceGain
Mimi nke US
Ọ bụ ezigbo ọrụ na-egosi ọdịnaya ndị ziri ezi. Eleghi anya nke kachasị m mma!
Nke a bụ naanị onye na-eweta ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi. Enwere m ọtụtụ ọrụ na mbụ mana enweghị nsonaazụ. Ha rụrụ ezigbo ọrụ!
Ọrụ dị ezigbo mma na ezigbo ndị mmadụ! Nnọọ iwu !!! Ugbu a ọwa m na-ebipụta $ ekele maka ọrụ a dị ịtụnanya ...
Kpakpando 5 na-achọ ka m nye kpakpando iri ⭐️ Ọ dị mma na Jekọb Jekọb nyere aka mgbe niile na-aza ajụjụ ọ bụla. Enwetara m ego na-erughị awa 10 mgbe m gwụchara awa m niile. Usoro a dị obere ma ọ bara uru, echere m na ha chọrọ ijide n'aka na ha mere ya n'ụzọ ziri ezi m ga-akwado ndị otu ka ha rụọ ọrụ na m ga-esokwa ha rụọ ọrụ n'ọdịnihu Obi dị m ụtọ na ekele ọzọ. Ọ bụrụ n’ị gụọ nke a gaa lelee ọwa m Ahhchoo ❤️ Obi ụtọ na afọ ọhụrụ onye ọ bụla.
Daalụ ndị na-ege ntị na-ege ntị ugbu a abụ m onye mmekọ youtube, ọzọ ana m ekele gị nke ukwuu (jabob)
Ezigbo ọrụ. Ha nwere nkwado kachasị n'ịntanetị. Dị nnọọ mma, obiọma na ihe ọmụma. Daalụ, Ndị na-ege ntị. Ikwesiri kariri kpakpando ise.
AudienceGain.net bụ ngọzi maka YouTubers dị ka anyị na-arụsi ọrụ ike n'ịmepụta ọdịnaya dị mma maka ndị na-ekiri anyị. N'okwu asọmpi a, ọ dịghị mfe ịnweta oge nche n'agbanyeghị etu ọdịnaya gị siri dị mma. Site na nnukwu ọrụ ndị ahịa sitere na AudienceGain, enwetara m monetization n'ime otu ọnwa nke ịhọrọ maka ọrụ ha. Jacob, site na ọrụ ndị ahịa, na-enye gị ọgwụgwọ VIP. Ana m akwado ọrụ ha maka ndị okike niile na-atụ anya oge elekere anya dị elu na vidiyo ha.
Chukwu m kedu ihe m ga-ekwu na ndị a dị egwu, ugbu a amalitere m ikwere na ọrụ dị ka oge elekere na-abawanye na naanị naanị n'ihi Nlekọta Ndị Ahịa. Usoro m nke oge elekere 3000 gwụchara n'oge ma ha nọnye m kwa ụbọchị iji kwado. My ọwa ugbu a Monetized ekele AudienceGain.net. Ana m akwado onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ nke AudienceGain, enwere m ike ị nzọ na ị ga-abịaghachi ebe a inye ha 5 *. Daalụ a ton AudienceGain.net 😊
Music Platter MPlatter
Ọrụ dị egwu maka ezigbo ọnụahịa. Otu nnukwu ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ. Ha nyeere m aka inweta ego. Enweelarị m ndị debanyere aha 1000 mana ọ dị m mkpa ịzụta oge elekere 3000 iji nweta akara. Nke a nwetara ego akaụntụ m n'ime izu. Inwee obere ego kwa ubochi kemgbe I meela ka ndị na-ege ntị nweta. Otu onye Ọstrelia
Ha dị ukwuu !! Mgbe ha mechara iwu ahụ, etinyere m maka ego ma nweta azịza ya ụbọchị 2 gachara. Egoro m ego !!! Guysmụ okorobịa a na-arụ ọrụ nke ọma. Daalụ nke ukwuu.
Enwere m ezigbo ahụmịhe ịzụrụ ọwa YouTube na weebụsaịtị a. Ana m akwado onye ọ bụla nwere mmasị.
Obi dị m ụtọ na ogo nke ọrụ a. Ha emeela ihe ekwere na nkwa. Aga m enye akara 110/100 na arụmọrụ, na-ewulite ntụkwasị obi na afọ ojuju ndị ahịa. Abụ m onye ofufe ha ugbu a. Chaị kedu ahụmịhe na-arụ ọrụ na Audiencegain.net. Ọ ga-amasị m ka mmekọrịta ahụ na-aga n'ihu kwa. Daalụ ndị na-ege ntị na-enyere aka iji mezuo ebumnuche m site na njirimara na arụmọrụ gị.
Ana m enye iwu site na ndị na-ege ntị na ntanetị 1000 oge elekere maka ọwa YouTube ọhụrụ m ma ana m anata ndị ahụ maka obere oge otu izu ahịa okporo ụzọ, n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a kwadoro m maka mmemme mmemme YouTube. Anaghị m akwado onye ọ bụla chọrọ enyemaka iji wulite ọwa YouTube ọhụrụ, jiri enyemaka nke ndị na-ege ntị. Svetlana Tiedemann
nnukwu saịtị. na mbụ enwere m obi abụọ n'ihi ahụmịhe ọjọọ n'oge gara aga mana saịtị a na-arụ ọrụ ha kwụ ọtọ. ọ bụrụ na ị nwekwara obi abụọ m ga-ekwu na mbụ mkparịta ụka na .. nke a ga - enyere gị aka ikpebi. otu n'ime ha (jacob na David) dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile. ha nwere ezigbo obi ebere na ndidi.ọwa m na-echekwa ma ọ bara uru ide ahịrịokwu ole na ole ..
Guysmụ nwoke a napụtara nsonaazụ dị ka nkwa! Daalụ nke ukwuu maka inyere m youtube ọwa! Ukwuu na-atụ aro!
Ekele maka ọrụ gị ọ na-arụ ọrụ 100% ziri ezi m nwetara ihe karịrị elekere elekere 2,000 ma ọ nyeere m aka imezu ebumnuche m na YouTube ugbu a enwere m ego maka ọrụ enyemaka gị ọ bara uru ma enwere m obi ụtọ na m tinyere ego m na ọrụ weebụsaịtị gị ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke nke ọma maka ọwa m youtube kwadoro m naanị na 3-4 ụbọchị n'elu oge emesia na ekele ọzọ maka ọrụ gị erutela m ndị debanyere aha m 1,000 na elekere 4,000 na enwetara m ihe karịrị 200,000 echiche na ọwa m maka ọrụ enyemaka gị.
ụmụ okorobịa a nyefere kpọmkwem ihe ha kpọsara na ọrụ ha na ọrụ ha niile masịrị m nke ukwuu. Ha zara ajụjụ ọ bụla ngwa ngwa m na-akwado ha na ọrụ ha ejirila m ha ọzọ
Kedu otu ihe dị mkpa YouTube Design Graphic?
Dị ka ị maara, echiche mbụ dị oke mkpa mgbe niile. Ọ na-eme mkpebi ndị na-ege ntị ka ha lee vidio gị ma ọ bụ na ha agaghị ele. Nnukwu thumbnail nwere ike inyere vidiyo gị aka ịdị n'etiti ndị ọzọ nwere echiche karịa gị na nke ọzọ.
Banner & Akara:
Nhazi nke ọkọlọtọ ọwa gị na akara ngosi na-ekpebi otu ndị na-ege ntị ga-esi lee ọwa gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-enweghị mmasị ma ọ bụ ihe siri ike nghọta ọkọlọtọ / akara ngosi, ndị na-ekiri ya nwere ike ilepụ anya ma gosipụta enweghị mmasị na ọwa gị tupu ị na-ele vidio ahụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere mma, pụrụ iche ọkọlọtọ / logo imewe, ndị mmadụ ga-adị mfe wetara kwupụta ya.
You nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị vidiyo ọ bụla?
Ee n'ezie. Ọ baghị uru n ’ụdị ọdịnaya ọwa gị dị; anyị ka nwere ike ịmepụta eserese maka ya.
Gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nhazi ahụ?
Enwere ike ịkpọtụrụ anyị ma nye nkọwa zuru ezu banyere echiche gị, anyị ga-eme nyocha ahụ!
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji wuchaa ya?
Emekarị, ọ na-ewe 36 awa iji wuchaa a imewe. Agbanyeghị, biko mee ka anyị mara ma ịchọrọ ime nke ahụ ọsọ ọsọ. Nke ahụ dị anyị mma mgbe niile.
Biko hapụ ala a n'efu
apụ, karịsịa maka gị 🎁
Debanye aha iji nweta ndụmọdụ gị naanị maka ọwa gị site na ndị otu ọkachamara nke AudienceGain, ma na-edebe ngwaahịa na onyinye anyị kachasị ọhụrụ!
Anyị na-adịghị spam! Gụọ nke anyị amụma nzuzo n'ihi na ihe Ama.
Lelee igbe mbata gị ma ọ bụ spam nchekwa iji kwado ndenye aha gị.
Banyere ndị na-ege ntị
AudienceGain Ltd - 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX